ကဲ!ဂေါ်မစွံ့ပါဖူးဆိုတဲ့သူတွေနေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးမြို့(၁၂)မြို့ပါတဲ့။ | Buzzy
Singleဖြစ်နေလို့ပါ။ FAဘွကြီးကဆိုးပါတယ်ကွာ။ဒီတသက်တော့လမ်းမြင်ကမ်းမမြင်မို့ ငှက်ပျောပင်စိုက်ရပါတော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေ ဘာမှအားမငယ်ကြပါနဲ့တော့။အဲ့ဒီလို single တွေ FA တွေအတွက် ခဏတဖြုတ်လည်ပတ်ဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊သွားရောက်နေထိုင်ဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် အသင့်တော်ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေကို အင်တာနက်votingတွေအရ သတ်မှတ်ထားလိုက်ပါပြီတဲ့ဗျာ။ ကိုင်း၊ ဘယ်လောက်အားရစရာကောင်းသလဲ။ ဒါဆိုရင်အဲ့တာတွေကဘယ်နိုင်ငံတွေလည်း? ဘယ်လိုအရာတွေကြောင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာလည်း ဆိုတာသိရဖို့အတွက်နဲ့အတူတူသွားမယ့်ဘော်ဒါတွေရှိတယ် ဆိုရင်လည်းအမြန်လက်တို့ပြီးပြောပြရအောင် လင်ခ့်ကိုနှိပ်ပြီး ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု့လိုက်ပါ။
Singleဖွဈနလေို့ပါ။ FAဘှကွီးကဆိုးပါတယျကှာ။ဒီတသကျတော့လမျးမွငျကမျးမမွငျမို့ ငှကျပြောပငျစိုကျရပါတော့မယျဆိုတဲ့သူတှေ ဘာမှအားမငယျကွပါနဲ့တော့။အဲ့ဒီလို single တှေ FA တှအေတှကျ ခဏတဖွုတျလညျပတျဖို့ဘဲဖွဈဖွဈ၊သှားရောကျနထေိုငျဖို့ဘဲဖွဈဖွဈ အသငျ့တျောဆုံးနှငျ့အကောငျးဆုံးနိုငျငံတှကေို အငျတာနကျvotingတှအေရ သတျမှတျထားလိုကျပါပွီတဲ့ဗြာ။ ကိုငျး၊ ဘယျလောကျအားရစရာကောငျးသလဲ။ ဒါဆိုရငျအဲ့တာတှကေဘယျနိုငျငံတှလေညျး? ဘယျလိုအရာတှကွေောငျ့သတျမှတျခံခဲ့ရတာလညျး ဆိုတာသိရဖို့အတှကျနဲ့အတူတူသှားမယျ့ဘျောဒါတှရှေိတယျ ဆိုရငျလညျးအမွနျလကျတို့ပွီးပွောပွရအောငျ လငျချ့ကိုနှိပျပွီး ၀ငျရောကျဖတျရှု့လိုကျပါ။့။
Atlanta မြို့ဟာဆိုရင်singleတွေအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့များဆိုပြီး စာရင်းသုံးခုကောက်ရာမှာ သုံးခုလုံးရဲ့နံပါတ်တစ်နေရာမှပါလာတာပါတဲ့။ ညဘက်ထွက်စရာနေရာတွေအများအပြားရှိတာတွေ ကလပ်အမြောက်အများရှိတာတွေ၊ယောက်ကျားမိန်းမ လူဦးရေမျှတာတွေအပြင် အဲ့ဒီမှာ လက်မထပ်ရသေးတဲ့ လူဦးရေက မြို့တစ်မြို့လုံး လူဦးရေရဲ့(၇၀)ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိပါတယ်တဲ့ဗျာ။ (ဒီလိုဆိုရင်တော့ချက်ချင်းတောင်ပြေးသွားချင်မိတယ်။)
Atlanta မွို့ဟာဆိုရငျsingleတှအေတှကျအကောငျးဆုံးမွို့မြားဆိုပွီး စာရငျးသုံးခုကောကျရာမှာ သုံးခုလုံးရဲ့နံပါတျတဈနရောမှပါလာတာပါတဲ့။ ညဘကျထှကျစရာနရောတှအေမြားအပွားရှိတာတှေ ကလပျအမွောကျအမြားရှိတာတှေ၊ယောကျကြားမိနျးမ လူဦးရမြှေတာတှအေပွငျ အဲ့ဒီမှာ လကျမထပျရသေးတဲ့ လူဦးရကေ မွို့တဈမွို့လုံး လူဦးရရေဲ့(၇၀)ရာခိုငျနှုနျးနီးပါးရှိပါတယျတဲ့ဗြာ။ (ဒီလိုဆိုရငျတော့ခကျြခငျြးတောငျပွေးသှားခငျြမိတယျ။)
ဒီမြို့ကတော့အခုစာရင်းထဲကဈေးအပေါဆုံးမြို့မဟုတ်တာတော့သေချာတယ်။ ဒါပေမယ့် စာရင်းသုံးခုကောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမြို့ကလည်းအခန်းကဏ္ဍတစ်ခု အဖြစ်နဲ့ကိုပါလာတယ်။ဘာလို့လည်း
ဆိုတော့ San Francisco မြို့ရဲ့ ညဘက်အချိန် လမ်းမတွေမှာ မီးရောင်စုံတွေနဲ့အရမ်းစည်ကားပြီးတော့ မီးရောင်တွေနဲ့ဆိုမှ အချစ်စိတ်တွေ ပိုထတက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကြောင့် သူကလည်းနံပါတ်(၂)နေရာ မှာပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ (ဟိုသီချင်းလေးတောင်သတိရမိတယ်။ နေ၀င်ချိန်တွေအတူလျှောက်လည် ၊
ဒီမွို့ကတော့အခုစာရငျးထဲကစြေးအပေါဆုံးမွို့မဟုတျတာတော့သခြောတယျ။ ဒါပမေယျ့ စာရငျးသုံးခုကောကျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာဒီမွို့ကလညျးအခနျးကဏ်ဍတဈခု အဖွဈနဲ့ကိုပါလာတယျ။ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ San Francisco မွို့ရဲ့ ညဘကျအခြိနျ လမျးမတှမှော မီးရောငျစုံတှနေဲ့အရမျးစညျကားပွီးတော့ မီးရောငျတှနေဲ့ဆိုမှ အခဈြစိတျတှေ ပိုထတကျတယျဆိုတဲ့အခကျြတှကွေောငျ့ သူကလညျးနံပါတျ(၂)နရော မှာပါဝငျလာတာဖွဈပါတယျ။ (ဟိုသီခငျြးလေးတောငျသတိရမိတယျ။ နဝေငျခြိနျတှအေတူလြှောကျလညျ ၊အိမျပွနျခြိနျဆို အတူရှိမယျ။)
Minneapolis မြို့မှာဆိုရင် Singleဖြစ်နေတဲ့ ယောက်ကျား၊မိန်းမလူဦးရေ ဟာတူတူပါဘဲ။ (ကိုယ်ဒွေသွားရင် အားငယ်စရာမလိုတော့ဖူး။ သူလိုကိုယ်လို တွေချည်းဘဲ။ငိငိ။) ပြီးတော့ လက်မထပ်ရသေးတဲ့စုံတွဲဦးရေ ရာခိုင်နှုန်း ကလည်း ၆၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိပါတယ်။ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာစရာတွေနဲ့ ညဘက်လည်ပတ်ဖို့ အတွက်ခေါင်းစဉ်ကောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့မြို့ဖြစ်တာကြောင့် သူလည်းစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
Minneapolis မွို့မှာဆိုရငျ Singleဖွဈနတေဲ့ ယောကျကြား၊မိနျးမလူဦးရေ ဟာတူတူပါဘဲ။ (ကိုယျဒှသှေားရငျ အားငယျစရာမလိုတော့ဖူး။ သူလိုကိုယျလို တှခေညျြးဘဲ။ငိငိ။) ပွီးတော့ လကျမထပျရသေးတဲ့စုံတှဲဦးရေ ရာခိုငျနှုနျး ကလညျး ၆၄ ရာခိုငျနှုနျးအထိရှိပါတယျ။ အနုပညာနဲ့ပတျသကျပွီးလလေ့ာစရာတှနေဲ့ ညဘကျလညျပတျဖို့ အတှကျခေါငျးစဉျကောငျးတှအေမြားကွီးရှိတဲ့မွို့ဖွဈတာကွောငျ့ သူလညျးစာရငျးထဲမှာ ပါဝငျလာခဲ့ပါတယျ။
နောက်ထပ်တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ Austinမြို့ကတော့ အရမ်းထူးဆန်းပြီး၊ အရမ်းဂုဏ်ယူ စရာကောင်းတာကြောင့် အဲ့ဒီမှာ ချစ်သူရပြီးတော့ ချိန်းတွေ့ကြမယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းမှာပါ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အများကြီးနဲ့၊ အရက်သောက်စရာ နေရာတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေအများကြီး ရှိတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းမှာ အချက်အချာကျတဲ့နေရာမှာဒီမြို့ကိုလည်းသတ်မှတ်ထားလိုက်ရပါတယ်။
နောကျထပျတဈမွို့ဖွဈတဲ့ Austinမွို့ကတော့ အရမျးထူးဆနျးပွီး၊ အရမျးဂုဏျယူ စရာကောငျးတာကွောငျ့ အဲ့ဒီမှာ ခဈြသူရပွီးတော့ ခြိနျးတှကွေ့မယျဆိုရငျတော့ အရမျးပြျောဖို့ကောငျးမှာပါ။ တက်ကသိုလျကြောငျးသူကြောငျးသားတှေ အမြားကွီးနဲ့၊ အရကျသောကျစရာ နရောတှေ၊ စားသောကျဆိုငျတှအေမြားကွီး ရှိတာကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့စာရငျးမှာ အခကျြအခြာကတြဲ့နရောမှာဒီမွို့ကိုလညျးသတျမှတျထားလိုကျရပါတယျ။
Boston မြို့ကြီးမှာလမ်းလျှောက်ရတာအရမ်းကောင်းတဲ့နေရာတွေရှိပြီးတော့ အစားအသောက်ကောင်းတွေ အရမ်းလှတဲ့ရေကန် ကြီးတွေရှိတာကြောင့် လုံးဝမိုက်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ငြင်းလို့မရပါဖူး။ အဲ့တာတွေအပြင် မြို့နေလူဦးရေရဲ့ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းကလက်မထပ်ရသေးတဲ့သူတွေပါတဲ့ဗျာ။ (Singleတွေနည်းတာမှမဟုတ်တာ)
Boston မွို့ကွီးမှာလမျးလြှောကျရတာအရမျးကောငျးတဲ့နရောတှရှေိပွီးတော့ အစားအသောကျကောငျးတှေ အရမျးလှတဲ့ရကေနျ ကွီးတှရှေိတာကွောငျ့ လုံးဝမိုကျတဲ့မွို့ဖွဈတယျဆိုတာတော့ငွငျးလို့မရပါဖူး။ အဲ့တာတှအေပွငျ မွို့နလေူဦးရရေဲ့ (၇၀)ရာခိုငျနှုနျးကလကျမထပျရသေးတဲ့သူတှပေါတဲ့ဗြာ။ (Singleတှနေညျးတာမှမဟုတျတာ)
Single လူဦးရေပမာဏဟာ ၆၈ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Clevelandဟာဆိုရင်လည်း singleတွေများတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမှအတော်များတဲ့နိုင်ငံလို့ဆိုရပါမယ်။ ပြီးတော့ အတော်လှတဲ့ရေကူးကန်တွေ လည်းရှိတယ်။ ဘားတွေလည်းအများအပြားရှိပြီးတော့ ရိုးရာပုံရိပ်တွေလည်ှးရှိပါပြီးတော့ ချစ်ခွင့်ပန်ဖို့အတွက် လည်းနေရာတွေပြင်ဆင် ပေးထားတာကြောင့် အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့မြို့တစ်မြို့ပါဘဲ။
Single လူဦးရပေမာဏဟာ ၆၈ရာခိုငျနှုနျးဆိုတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့လို့ Clevelandဟာဆိုရငျလညျး singleတှမြေားတဲ့နိုငျငံတှထေဲမှာမှအတျောမြားတဲ့နိုငျငံလို့ဆိုရပါမယျ။ ပွီးတော့ အတျောလှတဲ့ရကေူးကနျတှေ လညျးရှိတယျ။ ဘားတှလေညျးအမြားအပွားရှိပွီးတော့ ရိုးရာပုံရိပျတှလေညျှးရှိပါပွီးတော့ ခဈြခှငျ့ပနျဖို့အတှကျ လညျးနရောတှပွေငျဆငျ ပေးထားတာကွောငျ့ အရမျးအဆငျပွတေဲ့မွို့တဈမွို့ပါဘဲ။
နာမည်တော်တော်များများရင်းနှီးနေတဲ့မြို့ပါဘဲ။ အဲ့ဒီမြို့ကမှာချစ်သူရှာမယ်ဆိုရင်တော့ ယောက်ကျားလေးတွေအတွက်ကတော့ နတ်သမီးတွေအတွက်ကားတော့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမယ့် ကလပ်တွေအများကြီးကို ဖိတ်ထားလို့ဆိုပြီးတော့ အဝေးကြီးတွေမသွားသင့်ပါဖူး။ Los Angeles မှာနေဖို့နိုင်ငံတခုလုံးကလာတဲ့သူကော တစ်ကမ္ဘာလုံးကလာတဲ့သူတွေကောထဲမှာ အများဆုံးကတော့ လက်မထပ်ရသေးတဲ့လူတွေပါတဲ့။ (ပိုက်ဆံတော့အများကြီးယူသွားမှရမယ်ထင်တယ်။)
နာမညျတျောတျောမြားမြားရငျးနှီးနတေဲ့မွို့ပါဘဲ။ အဲ့ဒီမွို့ကမှာခဈြသူရှာမယျဆိုရငျတော့ ယောကျကြားလေးတှအေတှကျကတော့ နတျသမီးတှအေတှကျကားတော့လိုပါလိမျ့မယျ။ဒါပမေယျ့ ကလပျတှအေမြားကွီးကို ဖိတျထားလို့ဆိုပွီးတော့ အဝေးကွီးတှမေသှားသငျ့ပါဖူး။ Los Angeles မှာနဖေို့နိုငျငံတခုလုံးကလာတဲ့သူကော တဈကမ်ဘာလုံးကလာတဲ့သူတှကေောထဲမှာ အမြားဆုံးကတော့ လကျမထပျရသေးတဲ့လူတှပေါတဲ့။ (ပိုကျဆံတော့အမြားကွီးယူသှားမှရမယျထငျတယျ။)
Florida အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီမြို့မှာတော့ ပိုက်ဆံအကုန်အကျမများဘဲ အလွယ်တကူတွေ့ ပြီး ရောရောနှောနှောနေလို့ရအောင် ပြုလုပ်ပေးထားတာကြောင့် Single တွေရဲ့အသည်းနှလုံး ကိုသိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Florida အနောကျဘကျမှာရှိတဲ့ဒီမွို့မှာတော့ ပိုကျဆံအကုနျအကမြမြားဘဲ အလှယျတကူတှေ့ ပွီး ရောရောနှောနှောနလေို့ရအောငျ ပွုလုပျပေးထားတာကွောငျ့ Single တှရေဲ့အသညျးနှလုံး ကိုသိမျးပိုကျထားတာဖွဈပါတယျ။
New Yorkမြို့ထဲကဈေးပေါပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေကတောင် တခြားနေရာ တွေမှာ သာမာန်အားဖြင့်ဈေးကြီးပါတယ်။ သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ တစ်နေရာကနေတစ်နေရာသွားဖို့ဆိုရင် မြေအောက်ရထားကိုဈေးပေါပေါနဲ့ စီးနိုင်ပြီးတော့ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုယ်သုံးသွားပြီး အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေရိုက်ဖို့အတွက် single အမြောက်အများကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်တဲ့ဗျာ။
New Yorkမွို့ထဲကစြေးပေါပါတယျဆိုတဲ့နရောတှကေတောငျ တခွားနရော တှမှော သာမာနျအားဖွငျ့စြေးကွီးပါတယျ။ သတငျးကောငျးတဈခုကတော့ တဈနရောကနတေဈနရောသှားဖို့ဆိုရငျ မွအေောကျရထားကိုစြေးပေါပေါနဲ့ စီးနိုငျပွီးတော့ ဒါမှမဟုတျရငျလညျး ကိုယျ့ခွထေောကျကိုယျသုံးသှားပွီး အခဈြဇာတျလမျးလေးတှရေိုကျဖို့အတှကျ single အမွောကျအမြားကို ရှာဖှနေိုငျပါတယျတဲ့ဗြာ။
Chicago မှာဆိုရင်တော့ အိမ်နီးနားချင်းအချင်းချင်းတောင်ကြိုက်လို့ရပါတယ်တဲ့။ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ညဘက်
လည် ပတ်စရာတွေအများကြီးရှိကြပြီးတော့ ၆၃ရာခိုင်နှုန်းက လက်မထပ်ရသေးတဲ့သူတွေပါတဲ့။
ကဲ ဒီလောက်ရိုးရှင်းပြီးပွင့်လင်းလှတဲ့မြို့မှာသွားနေတာ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။
Chicago မှာဆိုရငျတော့ အိမျနီးနားခငျြးအခငျြးခငျြးတောငျကွိုကျလို့ရပါတယျတဲ့။ စားသောကျဆိုငျတှနေဲ့ညဘကျ လညျ ပတျစရာတှအေမြားကွီးရှိကွပွီးတော့ ၆၃ရာခိုငျနှုနျးက လကျမထပျရသေးတဲ့သူတှပေါတဲ့။ ကဲ ဒီလောကျရိုးရှငျးပွီးပှငျ့လငျးလှတဲ့မွို့မှာသှားနတော ပိုကောငျးမယျထငျတယျနျော။
ရုပ်ရှင်တွေထဲကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ Las Vigas ဆိုတဲ့မြို့ထဲမှာ ညဘက်သွားလို့မကုန်နိုင်တဲ့ နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ မြို့ထဲမှာ single တွေများလာတာကြောင့် တကမ္ဘာလုံးကလာလည်တဲ့သူတွေနဲ့အမြောက်အများ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံသစ်တွေကို လာလာဖန်တီးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အခုစာရင်းထဲ သူလည်းပါလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရုပျရှငျတှထေဲကွညျ့ဖူးကွမှာပါ။ Las Vigas ဆိုတဲ့မွို့ထဲမှာ ညဘကျသှားလို့မကုနျနိုငျတဲ့ နရောတှအေမြားကွီးရှိတယျဆိုတာကိုလညျးသိပွီးဖွဈမှာပါ။ မွို့ထဲမှာ single တှမြေားလာတာကွောငျ့ တကမ်ဘာလုံးကလာလညျတဲ့သူတှနေဲ့အမွောကျအမြား စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးတဲ့ အတှအေ့ကွုံသဈတှကေို လာလာဖနျတီးကွတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့လို့ အခုစာရငျးထဲ သူလညျးပါလာခွငျးဖွဈပါတယျ။
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က နဲ့အဆက်အသွယ်များစွာရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးတော့ လူဦးရေရာခိုင်နှုန်းရဲ့ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းက လက်မထပ်ရသေးတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီး ဘာသာရေးအရခွဲခြားထားခြင်း လူမျိုးရေးအရခွဲခြား ထားခြင်းမရှိတဲ့မြို့ဖြစ်တာကြောင့် အရမ်းကြိုးစားလို့ကောင်းတဲ့ နေရာပါတဲ့။
ကမ်ဘာအရပျရပျက နဲ့အဆကျအသှယျမြားစှာရှိတဲ့မွို့ဖွဈပွီးတော့ လူဦးရရောခိုငျနှုနျးရဲ့ ၆၈ ရာခိုငျနှုနျးက လကျမထပျရသေးတဲ့သူတှဖွေဈကွပွီး ဘာသာရေးအရခှဲခွားထားခွငျး လူမြိုးရေးအရခှဲခွား ထားခွငျးမရှိတဲ့မွို့ဖွဈတာကွောငျ့ အရမျးကွိုးစားလို့ကောငျးတဲ့ နရောပါတဲ့။